Vivaldi, ilay mpizaha browser izay te-ho Opera miaraka amin'ny interface Metro | Avy amin'ny Linux
1 Inona no atao hoe Vivaldi?
2 Inona ary no entin'i Vivaldi ho antsika?
3 Makà Vivaldi
Inona no atao hoe Vivaldi?
Nisy namako vao nampahafantatra ahy Vivaldi, ary misy mpitety tranonkala iray hafa teraka izay nanandrana nameno ilay banga Opera namela mpampiasa maro, fa tahaka ny farany, tsy inona izany fa ny Google Chrome miaraka amin'ny fiasa vaovao. Raha ny marina dia Google Chrome tokoa io, ka raha handeha isika Inbox Ho hitantsika fa afaka miditra tsy misy olana isika.
Fa tsy te ho hentitra aho. Voalohany indrindra, nandinika azy io nandritra ny fotoana fohy aho, ary marina fa misy zavatra mahaliana ao anatiny, farafaharatsiny ara-maso. Nefa andao jerena izay tantara ao ambadik'ity browser ity raha ny filazan'ireo mpamorona azy manokana (iray amin'ireo mpanorina ny Opera raha ny marina):
Tamin'ny taona 1994, nisy programmer roa nanomboka niasa tamin'ny tranokala. Ny hevitray dia ny hanao mpizaha tena haingana be, afaka miasa miaraka amin'ny fitaovana voafetra, tsy hadino fa ny mpampiasa dia olona manana ny filany sy ny filany manokana. Teraka ny Opera. Nahazo vahana ny rindrambaiko kelinay, nitombo ny vondronay ary nisy ny fiarahamonina noforonina. Akaiky ny mpampiasa anay sy ny fotony izahay. Manatsara hatrany ny rindrambaiko izahay, mifototra amin'ny fanamarihana ataonay amin'ireo mpampiasa, ary koa ny hevinay momba ny fomba fanaovana tranokala tsara. Manavao sy miezaka ny hanana ny tsara indrindra izahay.
Mandrosoa haingana amin'ny 2015, tianay ilay browser na dia niova lalana aza izy io. Mampalahelo fa tsy manompo ny vondrom-piarahamonin'ireo mpampiasa sy mpandray anjara intsony izy izay nanampy tamin'ny fananganana ilay mpitety tranonkala tamin'ny voalohany.
Ary noho izany dia tonga tamin'ny fehin-kevitra voajanahary isika: tsy maintsy manao browser vaovao isika. Browser ho antsika ary fitetezana ho an'ny namantsika. Browser izay haingana, fa misy koa ny navigateur izay manan-karena amin'ny fampiasa, miovaova be ary mametraka ny mpampiasa ho lohalaharana. Browser izay natao ho anao.
Inona ary no entin'i Vivaldi ho antsika?
Ny zavatra voalohany ho hitantsika dia ny interface iray izay tena manakaiky ny fomban'ny Microsoft's Metro, izay ny mampiavaka azy dia ny tab ((mavitrika) manararaotra ny lokon'ny tranonkala vangiantsika. Tsipiriany tsara tarehy tokoa.
Satria ny tanjona dia ny hamerenana izay very avy Opera, mandova ny firafitry ny singa, ny menus ary ny topy maso ny takelaka rehefa manidina eo amboniny, ary koa ny menio lehibe ao amin'ny logo famantarana. Ho fanampin'izany, azontsika atao ny manangona ireo takelaka toy ny teo aloha.
Saingy mbola betsaka ny asa tokony hatao, satria na dia mandeha aza ny tontonana, dia mbola mivoatra ny mailaka, fa ny ambiny kosa dia mandeha foana: Tsoratadidy, naoty, fampidinana sns ... Toy ny amin'ny kinova taloha an'ny Opera, ny takelaka dia azo afenina tanteraka ary ny Speed ​​Dial dia mitovy amin'ny taloha ihany.
Ny varavarankely preferences dia manana safidy mety fotsiny ho an'ny kinova Vivaldi ankehitriny, ary manana pitsopitsony kely misy fahasamihafana. Mazava ho azy, tsy mandika na inona na inona amin'ny Google Chrome Preferences (toy ny Opera ankehitriny) ary amin'ny fotoana sasany dia manana zavatra tany am-boalohany izy.
Na dia nanandrana nanoratra an'ity lahatsoratra ity avy tao amin'ny Vivaldi aza aho dia manana olana amin'ny WordPress ilay mpizaha satria rehefa manandrana maka sary an-tsaina topi-maso ny maso, ny birao fitantanana dia mavesatra amin'ny takelaka hafa fa tsy ny topi-maso fotsiny. Saingy araka ny nolazaiko teo aloha dia mbola eo am-piandohan'ny dingana fampandrosoana izy, noho izany, tokony ho fantatsika ny fivoarany.
Vivaldi dia misy avy amin'ny tranokalanao ho an'ny sehatra rehetra (Windows, Mac ary Linux), amin'ny tranga farany ao anaty fonosana ho an'ny Debian sy RedHat. Raha mampiasa ArchLinux isika dia afaka mametraka azy amin'ny alàlan'ny AUR:
Fa eny, 64 Bits ihany no hitako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Vivaldi, ny mpizaha browser izay te-ho Opera miaraka amin'ny interface Metro
Tena tsara, saingy tsy dia tiako loatra ny webkit ho motera, heveriko fa mirona hofehezina-
Webkit dia efa nokapohin'ny fork Google antsoina hoe Blink (ilay ampiasain'ny Opera ankehitriny hatramin'ny nivoahan'ny kinova 14).
fa ny blink dia dikan-tranonkala iray namboarina ho chrome fotsiny. mbola ampihimamba blink / webkit ihany
Valio ny theguillox
Jhoed ram dia hoy izy:
Hatreto dia manantena aho fa hizara ny tabilao tsirairay i Firefox ho fizotra hafa toy ny fanaon'i Webkit, Firefox <3.
Valiny tamin'i Jhoed Ram
Manantena aho fa tsy hisy izany fahatezerana izany.
Raha ny marina dia marina izany. https://wiki.mozilla.org/Electrolysis ny tsy haiko raha azo ampavitrana amin'ny kinova ankehitriny satria mbola ao anaty fitsapana.
Firefox dia mbola tsy nifindra monina tany Blink na Webkit satria ny motera fandikana Gecko dia mbola mitaky ny fitakiany amin'ny fijerena pejin-tranonkala miaraka amin'ny fenitra eken'ny W3C.
Novakiako ilay rohy, saingy mieritreritra aho fa tsy azoko izay voalaza ao, satria amiko dia milaza fa tsy mampiasa afa-tsy dingana iray izy io.
Manantena aho fa tsy hisy izany! .. izay no tiako momba ny firefox! ny fananana dingana maro dia tsy dia tsara tarehy!
Notsapaiko izany, ary toa tsara, na somary tsy matotra aza, fa hihatsara. Ankoatr'izay, nametraka azy io tamin'ny fanohananako ny Espaniola amerikanina latina aho, saingy tsy mivoaka hanova fiteny.
Raha tsy izany dia tsara ny manomboka.
Ho an'ny KaOS, ao amin'ny KCP io
Avy amin'ny terminal:
Fork hafa an'ny Chromium manahaka ny interface Spartan? Aleoko mifikitra amin'ny Opera Blink 27 (farafaharatsiny mba nanatsarana ny fanjifana ny loharanon-karena ho faran'ity farany ity).
Mahatsiaro aho fa Operiptilian, ary tiako i Vivaldi, saingy mbola eo am-piandohana hatrany izy io ary na eo aza ny tsy fitoviana, toy ny presto taloha sy ny adiny amin'i Google, dia manana endrika tsara izy ... eny, ny haingam-pandeha dia leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, I te-hieritreritra fa ilay "problem-feature" mitovy amin'ny opera 11-12 izay nanantenan'izy ireo fa hameno ny pejy iray manontolo hanintona azy io
izany izao ... karakarain'izy ireo
Misy olona mandalo ahy ny fanohanana ny Espaniôla?
Misy olona mahalala ny fametrahana azy amin'ny freebsd? Misaotra Thank